Ankasitrahan’ny Tompo - Nataon’ny Loholona Erich W. Kopischke
Aprily 2013 | Ankasitrahan’ny Tompo
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 97:8.
Rakibolana Oxford amin’ny Internet,“manenina,” oxforddictionaries.com.
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 97:9.
Jereo ny Môsià 2:22.
Jereo ny Môsià 2:41.
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 50:41–42.
Hitondra hazavana mahagaga ho antsika ireo ôrdônansin’ny famonjena